Galmada dabada ee uurka | Gaaloos.com
Home » galmada » Galmada dabada ee uurka
Galmada dabada ee uurka
Uurka - ma aha cudur, iyo xaaladda khaaska ah ee qof dumar ah markii ay dhashay oo uu yeesho nolosha cusub. Sidaa darteed, xaqiijinta in ay meel xiiso leh waa in ay sii wadaan in ay ku noolaadaan nolol buuxda. Galmo inta ay uurka leedahay ama ay la baajiyay, ee ha sii haddii aad qabto sababo lahayn oo hore waxay keentaa xiiso leh.
halista haddii galmo inta aad uurka leedahay?
contraindication ugu weyn galmada inta aad uurka leedahay khatar ah dhicin. Xaaladaha noocaas ah, naag ayaa lagu muujiyay inta kale ee jirka iyo shucuurta, iyo fogaado falalka in ay kiciyaan jaqayo. Sidaa darteed, su`aasha "Waa mid waxtar leh in galmada inta aad uurka leedahay?" - Jawaabi karaa si cad u: "Haa, haddii ay jirto halis ku jirin joojinta"
Galmo inta ay uurka leedahay kicin wareegga dhiigga ee miskaha, iyo sida natiijo ah oo kor u socodka dhiigga ee ilmaha caloosha ku dhex mandheerta. Intaa waxaa dheer, markii idinkoo Junub ah ee maskaxda ee qof dumar ah oo uur yimaado sii daayo endorphins iyo enkephalins (hormones ahaanshaha), taas oo uu helo iyo carruurta.
Waxaa muhiim ah in ay xoogga saaraan in la`aanta ah ee galmada xilliga uurka aan xoojin doonaa xiriirka ee lamaanaha, laakiin halkii ay lid ku ah takooraan isqaba kasta oo kale. Sex bishii la soo dhaafay ee uurka aan la ahaan uu u, iyo perenashivanie xitaa talinayaa sida cuncun ee ilmo-galeenka dhalashada kicinayaa bilawga ah ee shaqada ka hor.
Sex xilliga uurka la mataano waqti ka dib 30 todobaad waxaa lagaga dhaqmayaa karaa daryeel weyn, sababtoo ah ilmo-galeenka culeysku ka gaadhista xad-dhaaf ah, waxa uu u keeni karaa shaqada dhicis ah.
galmada dabada xilliga uurka
Galmada dabada xilliga uurka weli waa arrin lagu muransan yahay. Dhakhaatiirta Qaar waxay yidhaahdaan in galmada dabada noqon kartaa sabab ay ku babaasiirta ama dhiig ka malawadka, haddii inta ay uurka leedahay waxaa jiray koror ah babaasiirta. Maqnaanshaha ka hortagga uurka, galmada dabada noqon sabab ay ku gasho flora xiidmaha siilka karo. Inta lagu guda jiro saamaynta galmada dabada on ilmo-galeenka waa xoog badan marka loo eego galmada siilka, si jaqayo daayaba waa xoog badan, taas oo sababi karo dhicis, sidaas ayay u fiican tahay in ay ka fogaadaan ka. Laakiin haddii aad dhabtii doonaysid inta ay uurka leedahay sida jinsiga, waxaad u baahan tahay in ay u hoggaansamaan dhammaan tallaabooyinka digniin.
khatarta ah in galmo inta ay uurka ilmaha?
galmo ma laha saamayn xun ku ilmaha, tan waxaa ilaaliyo murqaha ilmo galeenka, biyaha ilmaha, fur xab afka ilmo-galeenka. Wareegga dhiigga la kordhiyo in miskaha marka galmada wuxuu jidhka ka caawiyaa bixinta ilmaha ee ogsijiin iyo nafaqooyin. Endorphins lasii daayaba dhex gasho iyada oo socodka dhiigga utero-mandheerta iyo saamayn wanaagsan ku ilmaha.
rabitaanka galmada inta aad uurka leedahay
waxay doonayaan in ay galmo ku xiran tahay dhaqanka nin inta ay uurka leedahay xaaskiisa. Haddii ninkaaga inta ay uurka leedahay naagtiisa sii wadi doonaa in si taxadar leh oo jacayl u eegato, uu cadeeyay in isaga, waayo, waa, sida ka hor, soo jiidasho iyo la jecel yahay, ee jinsiga ee laba xaas oo kaliya loo hagaajiyo. Qof dumar ah oo u malaynayo kaliya oo ku saabsan uurka, si ay u la kulmaan naftooda iyo mustaqbalka ilmaha, laakiin u malaynayo -. Sida si ay u qanciso nin inta ay uurka leedahay
Inta lagu guda jiro uurka, muhiim ma aha in la siiyo ilaa xiriir galmo nin jecel yahay, in ay leeyihiin saamayn togan ku jidhka hooyada mustaqbalka iyo guurka. Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah is illowsiin kartaa galmo in handadaadda ee joojinta uurka iyo previa mandheerta waxaa gabi ahaan uu u.
Title: Galmada dabada ee uurka